Ukuphupha ngeGaraji yokupaka Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha legaraji Ukupaka. Ngaba uyafuna ukwazi intsingiselo yamaphupha? Funda ukutolikwa kwengqondo kunye nokomoya kwesi sikhokelo.
Kukho indawo yokupaka phantse kuzo zonke izixeko zeli lizwe. Isenokuba sisakhiwo esinezinga eliphezulu okanye indawo yokupaka iimoto ephantsi komhlaba. Ukupaka imoto yakho kwenye yezi ndawo zokupaka, zihlala zigadwe, zibonelela ngeendlela ezininzi.
Ke ngoko, ayihlali ngaphandle kwaye ikhuselwe ngcono kubusela nokonakaliswa kwempahla, ikwangumqobo. Kananjalo, ihlala ingathathi ixesha elide ukufumana indawo yokupaka. Nangona kunjalo, abantu abaninzi bayayiphepha imali, ngamanye amaxesha iphakame kakhulu. Abanye bakhathazwa ngumda wexesha, kuba igaraji yokupaka ihlala ivulekile de kube lixesha elithile.
Nabani na ophupha indawo yokupaka usenokuba ukhathazwe kukukhangela ixesha elide kwindawo yokupaka kusuku olungaphambi kwalolo. Okanye mhlawumbi isakhiwo siyakoyikisa. Ukutolikwa ngokuchanekileyo kwamaphupha kunokwenzeka, kubalulekile ukwahlula ukuba umphuphi ufuna indawo yasimahla kwindawo yokupaka kwaye ukuba uya kuyifumana.
1 Uphawu lwephupha «igaraji yokupaka» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «igaraji yokupaka» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «igaraji yokupaka» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «igaraji yokupaka» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo yephupha, nabani na oqhuba kwindawo yokupaka ephupheni ulungele umntu omfaneleyo. phumla. Ngokunokwenzeka umphuphi ulinde ixesha elide mva nje. Uphawu lwephupha luphawu lwe yeka kwaye ucothise isantya okungenani okwethutyana.
Umfanekiso wephupha unokwenza umphuphi aqonde ukuba akanalo ixesha lokuzonwabisa kubomi bemihla ngemihla. Indawo yokupaka isimemo esingumfuziselo ku Ukuphumla. Ngokubanzi, imoto ekutolikeni amaphupha iquka amandla okwenza izigqibo kunye nolawulo.
Nangona kunjalo, ukuba umntu ophuphayo upaka ngokungekho mthethweni imoto yakhe kwindawo yokupaka, uya kuba netyala elichasayo kwisimboli yamaphupha. Umphuphi mhlawumbi uzama ukuya ngokuchasene nobomi bokwenyani.
Ukukhangela indawo efanelekileyo yokupaka kubonisa ukutolikwa kwephupha ukuba umntu ophuphayo uyibonile into ayifunayo kunye neemfuno anazo. Iphupha le-odyssey kwindawo yokupaka liyakukhumbuza ukuba usenayo imisebenzi Kuya kufuneka uyenze ukufikelela usukelo lwakho.
Ukuba umntu ekugqibeleni ufumene iindawo zokupaka simahla kwaye unokumisa imoto yakhe, etolikwa ngamaphupha, lo ngumqondiso wokuba umphuphi ufumene inxenye yakhe ebalulekileyo kuye. Ukuba umntu ukhangela ilize kwindawo yokupaka, uphawu lwephupha lubonisa ubunzima lomntu uphuphayo ukufumana indawo ebomini apho anokuzalisekisa khona iitalente kunye namandla akhe.
Uphawu lwephupha «igaraji yokupaka» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lokuphupha "ukupaka" luphawu lokuphumla, ukuphumla kunye nokulingana. Nabani na opaka imoto yakhe apho ufumene iziko lakhe elingaphakathi ekutolikeni amaphupha kwaye anakho ibhalansi phakathi komsebenzi kunye nokuyeka.
Iphupha apho umntu eqhuba kuyo yonke indawo yokupaka kwaye efuna ngamandla indawo yokupaka ibonisa ukuba uphantsi kokomelela uxinzelelo. I-subconscious ibuza umphuphi ngale ndlela ukuba enze imeko apho uxinzelelo lwengqondo luyehla.
Ukuba imoto yakho imisiwe ukuze ungakwazi ukuphuma kwindawo yokupaka ephupheni, uphawu lwephupha luphawu lwe tshixa. Ekuchazeni amaphupha izithintelo zinokuvela kwiimpembelelo zangaphandle, kodwa zinokusekwa kubuntu okanye ekuziphatheni komphuphi ngokwakhe.
Ubusuku bokwenyani bunokuvela xa uphupha iindawo ezininzi zokupaka ngaphandle kokufumana indawo yokupaka simahla okanye uphume. Uphawu lwephupha lubonisa ukungoneliseki kwangaphakathi komphuphi nge ukuphelelwa lithemba.
Ukutolikwa kwamaphupha, eli phupha lihlala lidityaniswa nemeko yentshutshiso. Umphuphi ucinga ngokubaleka emntwini, kodwa ekugqibeleni uhlala eqhuba kwizangqa. Kweli phupha, uloyiko lokungazi luvakaliswa.
Uphawu lwephupha «igaraji yokupaka» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, uphawu lokuphupha "ukupaka" lubhekisa kwimfuno yekhefu kuphuhliso lwengqondo. Lixesha lokuba usebenzise ithuba amandla okomoya ukwenziwa ntsha.